Qormada Xallinta Dhibaatada, Fiiri Tallaabada Tusaha Tallaabada iyo Tusaalaha: Wararka Dugsiga ee Hadda
Qormada Xallinta Dhibaatada, Fiiri Tallaabada Tusaha Tallaabada iyo Tusaalaha
Qormooyinka xalinta dhibaatooyinka waa nooc caan ah oo qancin ah. Qormooyinkan, waa inaad ku sifeysaa dhibaato, aqristaha uga dhaadhicisaa inuu daryeelo dhibaatada, soo jeediyo xalka, una diyaar garowdo inaad baabi’iso wixii diidmo ah.
Tani iyo inbadan oo lamid ah tilmaamaha talaabo-tallaabo, waxaan kugula socodsiin doonaa koorsada maqaalkan. Aynu xusno qodobadan marka hore ka hor inta aynaan bilaabin.
Waa maxay Qormada Xallinta Dhibaatada?
Tilmaamaha Tallaabo-tallaabo ah
Soo Bandhig Dhibaatada
Samee Daryeel Akhriste
Rinji Sawir Gunaanad ah
Sideed Uqortaa Gunaanad Qormo Xallinta Dhibaatada?
Maxaa tusaale u ah Qormada Dhibaatada iyo Xalka?
Cilmu-nafsiga iyo Dhallinta
Qormada xalinta dhibaatada waxaa loo adeegsadaa in lagu sheego dhibaatada iyo qaababka lagu xaliyo. Waa qoraal dood leh taas oo aad waliba ujeedadeedu tahay inaad ka dhaadhiciso qofka ra’yigiisa. Badanaa waxaad ujeedadeedu tahay inaad ka dhaadhiciso akhristaha ficil gaar ah.
Marka la sharaxayo dhibaatada, qoraagu wuxuu kaloo bixiyaa xalal lagu xaliyo dhibaatada oo laga yaabo inay ka dhaadhiciso aragtida akhristaha. Qoraa ahaan, waxaad u baahan tahay inaad la timaado dhowr xal oo mushkilad gaar ah leh.
Qormada Xalinta Dhibaatada: Hagaha Talaabo-tallaabo ah
Xalka wanaagsan ee dhibaatada buug ayaa soo jeedinaysa xal si fudud loo fulin karo oo dabcan xallin doonta dhibaatada. Waa inaad iska ilaalisaa wax kasta oo faaruq ah oo aad ku dhagan tahay dhibaato gaar ah oo leh tallaabooyin gaar ah oo waxqabad leh.
Waa tan qaaciidadaada guusha:
1. Soo Bandhig Dhibaatada
Baaragaraafkaaga hordhaca ah, waxaad si taxaddar leh u qeexi doontaa dhibaatada. Muxuu yahay maxaase u baahan in la xaliyo? Ka dib markaad sidaa sameyso, sheeg bayaankaaga qoraalka. Gudaha qormooyinkan, qoraalkaagu wuxuu kuu noqon doonaa xalka dhibaatada. Si kooban ugu sheeg hal ama laba weedhood.
2. Samee Daryeel Akhriste
Kaliya ha ku sharixin dhibaatada sharaxaadda xun. Waa inaad ka sifeeysaa indhaha akhristayaasha. Ku soo bandhig mawduuca hab ka dhigi kara akhristaha inuu xiisaysto. Maxay dhibaatadan muhiim u tahay? Maxay u daneynayaan?
Waxaa jira siyaabo fara badan oo loogu soo jiito akhristayaasha. Soo bandhig tirakoobyo yaab leh oo ka nixinaya inay qaataan xiise lama filaan ah. La wadaag sheeko shaqsiyeed oo qalbi furan oo jiidi doonta halbawlaha wax yar. Ama, sharax sida ay dhibaatadu uga soo gudubtay arrin aan caadi ahayn una gudubtay sabab u qalanta.
3. Sharax Xalkaaga
Markaad qorto hordhacaaga, waa waqtigii lagu dhex quusin lahaa jirka qormada. Waxay kuxirantahay dhererka shuruudaha, waxaad ubaahnaan laheyd sedex cutub oo adag oo kahadlaya xalka.
Dabcan, waa inaad ku bilowdaa daahfurnaan. Sharax xalkaaga ereyo fudud oo qofkasta fahmi karo. Sii faahfaahin badan intii suurtogal ah ee ku saabsan sida tani u xallin doonto dhibaatada adiga oo aan loo helin erey aan loo baahnayn.
Meesha ay suurtagal tahay, daliil u hel xalkaaga. Sii tusaalooyin halka xalalka la midka ahi ay hore u soo shaqeeyeen. Sheeg fikradda khabiirka, tirakoobka, iyo daraasadaha.
Haddii aad soo jeedinayso xal cusub oo aan hore loo sii baadhin, markaa waxaad si weyn ugu tiirsanaan kartaa doodaha macquulka ah. Sharax sababta aad ugu maleyneyso in xalkaagu wax ku ool u noqon doono.
Markaad isku toleyso jirka qormadaada, maskaxda ku hayso saadka dhawaaqa. Kumaa maalgalinaya xalkaaga? Waqti intee le'eg ayay qaadan doontaa? Haddii aad sheegi kartid diidmo kasta oo muuqata, bilow inaad curinta maqaalkaaga soo afjarto iyadoo laga jawaabayo suurtagalnimada kartidan naqdin.
4. Rinji Sawir Gunaanad ah
Hadda, waxaa la joogaa xilligii qormada la soo afjari lahaa. Qeex talaabooyinka xiga ee ay tahay inay isla markiiba dhacaan. Sawir sawir cad ah sida adduunku u ekaan doono ka dib marka xalkaaga wax ku oolka ah la hirgeliyo.
Qaar ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu soo afjari karo qormada waxaa ka mid ah su'aalaha hal-ku-dhegga ah sida, "Miyaanay ahayn nooca adduunka aan dhammaanteen dooneyno inaan ku noolaano?" Ama, waxaad sheegi kartaa nooc ka mid ah wicitaanka ficilka. Weydiiso kuwa kale inay ku soo biiraan sababaha, ama u jiheeyaan ilo kale si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Sida loo Bilaabo Qormada Xallinta Dhibaatada
Qormo kasta oo bilow fiican leh waxay kasbataa inta ugu akhriska badan xiisaha ay qabaan. Hordhaca qormadu waxay muhiim u tahay magaca qof kasta. Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu bilaabo hordhaca warqadda xalinta dhibaatada.
Hordhacaadu waa inuu sharraxaa dhibaatada iyo sababta loogu baahan yahay xallinta arrinta. Hordhac ahaan, waa inaad ogaataa:
Haddii aad dooratay arrin aysan dadku guud ahaan ka hadleyn, markaa waa inaad marka hore sharraxdaa dhibaatada si faahfaahsan iyo saameynta dhibaatada.
Haddii dhibaatadu guud tahay, markaa waxaa ka sii muhiimsan inaad samaysid sawir muuqda oo dhibaatada ah si ay akhristayaashu u xiiseeyaan qormadaada.
Labada xaaladoodba, dareenka akhristaha waa inuu ahaadaa mudnaantaada isagoo qoraa ah.
Qoraalkaagu waa inuu noqdaa mid qancin kara oo ka turjumaya baahi xoog leh oo loo qabo xalinta dhibaatada.
Markaad dooratid dhibaatada oo aad ogaatid nooca ay tahay wax caadi ah iyo in kale, waxaa lagaa doonayaa inaad go'aansato furitaan wanaagsan. Furitaanka wanaagsan wuxuu noqon karaa wax kasta sida dhacdo nolosha dhab ah, xaqiiqooyin, iyo tirooyin, iwm. Qorayaasha badankood waxay u adeegsadaan furitaanka soo socda qormooyinkooda
Khayaali ahaan waxay muujineysaa dhibaatooyinka iyo saameynta ay leedahay.
Xaqiiqooyinka iyo tirooyinka. Akhristayaasha ayaa aad u soo jiita tirakoobka la xiriira dhibaato kasta.
Waxaad sidoo kale sheegi kartaa asalka dhibaatada.
Tixraac buug, filim, show TV la xiriira dhibaatada.
Talooyin Dheeraad ah oo ku saabsan Sida loo Bilaabo Qormada Xallinta Dhibaatada
Kadib markaad doorato furitaanka, waa inaad qortaa jumlad mowduuc ah. Weedh mowduuc ah waa weedh sheegaysa dhibaatada iyo xalka si sax ah. Waxay noqon kartaa bilowga hore, barta bartamahaaga gogoldhigga ama dhammaadka ah.
Qorayaasha qaar waxay doorbidaan kudarista jumlada mowduuc dooda dhamaadka. Ujeeddadoodu waa inay muujiyaan dhibaatada oo dhan ka dibna bixiyaan jumlad kooban sawirka.
Hordhaca kadib, waxaad haysaa qaybta ugu muhiimsan ee qoraalkaaga si aad uhesho. Jirka ugu weyni wuu ka badnaan karaa saddex sadar laakiin tan macnaheedu maaha inaad sheekooyin sheegi karto. Baaragaraafadu waa inay noqdaan kuwo sax ah oo si cad u sheegaya xalka dhibaatada. Xalalka la sheegay waa inay noqdaan:
Waqti wax ku ool ah.
Waa inay u cadahay akhristaha in xalalka si fudud loo fulin karo.
Akhristaha waa inuu ogaadaa xaqiiqda ah in xalalka ay xallin doonaan dhibaatada haddii la hirgaliyo. (tusaalayaashu si fiican ayey halkan ugu shaqeyn lahaayeen)
Qoraa ahaan, waa inaad sidoo kale taxaddartaa intaad xallineyso xalalka maxaa yeelay xalalka waa la isweydiin karaa. Dood lagu qanci karo, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso diidmada qorshahaaga si taxaddar leh oo aad uga hortagto si macquul ah.
Mar alla markii aad ku dhammaysatid hordhaca iyo qaybta ugu muhiimsan, waxaad u baahan tahay inaad diiradda saarto gabagabada. Qormo kastaa waa inay lahaataa gunaanad dhammaystiran haddii kale qormada oo dhami way kharribmi kartaa. Gunaanadku wuxuu noqon karaa hal ama dhowr cutub. Fikradaha wax ku oolka ah ee gabagabada fiican waa:
U sheeg akhristayaashaada waxa dhici kara.
Sharax saamaynta hirgelinta qorshahaaga.
Tusaalooyinka nolosha dhabta ah waa la bixin karaa haddii qorshaha horay loo qaatay.
Khubaro markhaati ah, tirakoob, xaqiiqooyin sidoo kale waa la sheegi karaa.
Arday badan ayaa adeegsada tusaalooyinka internetka ama ilaha kale si ay ugu qoraan qormada dhibaatada iyo xalka. Halkan waxaa ku yaal tusaale ka socda dhinaceena kaa caawin kara inaad si fiican u fahamto una qorto qormada:
Cudurka nafsiga ah ayaa aad ugu badan xilligan maanta, gaar ahaanna dhalinyarada. Niyad jab, walwal, khalkhal ku yimaad shakhsiyadda, iyo waxyaabo kaloo badan ayaa caan ah. In kabadan 50% dhalinyarada ayaa dhibane u ah cudurada maskaxda.
Su’aasha ayaa ka dhalanaysa “Waa maxay caafimaadka maskaxda? ” Waa fikrad khaldan guud ahaan in kaliya jirro maskaxeed ay ka muuqato qaabka naafonimada. Sidan xaalku maaha. Jawaab kasta oo aan caadi ahayn ama lama filaan ah oo ka timaadda shaqsi waxqabadyada caadiga ah waxaa lagu sheegaa inay tahay "jirro nafsi ah."
Tusaale ahaan, wiil / gabar ayaa laga yaabaa inay muujiyaan gardarro ku saabsan dood caadi ah oo ka dhacda meeshiisa. Cudurka nafsaaniga ah wuxuu waxyeeleeyaa dhallinteenna sababaha ugu waaweyn ee ka dambeeya cudurrada noocan ahna waa ka-qaybgalka waalidka, balwadaha, iyo naxdinta laga yaabo inay sabab u tahay sabab kasta.
Sii wad Akhriska…
Waxaa jira xalal dhowr ah oo ku saabsan dhibaatadan kuwaas oo saddexda soo socota si fudud loo hirgelin karo. Marka hore, shaqsiyaadka waa inay ahaadaan kuwa firfircoon jimicsi.
Waa inay helaan hurdo ku filan oo ay helaan cunto isku dheeli tiran. Culeyskooda waa in la yareeyaa. Jimicsigu wuxuu caawiyaa dheecaanka hoormoonka ee wanaagsan ee ka caawiya yareynta buuqa iyo walaaca. Waxay sidoo kale ka caawineysaa joojinta balwadaha oo inta badan dhalinyarada ay qaataan sababo anshax xumo.
Marka labaad, waalidku waa inay si fiican uga qayb qaataan nolosha ilmahooda. Waa waajibka ugu weyn ee waalidiinta inay ka caawiyaan caruurtooda inay la kulmaan dhibaatooyinka oo dhan geesinimo halkii ay uga tagi lahaayeen kaligood xaalad sidan u muhiim ah.
Waa inay ka caawiyaan ilmahooda joojinta dhammaan noocyada balwadaha. Guud ahaan, dhalinyarada waxay u arkaan daroogada mid aad u soo jiidasho leh oo astaan ​​u ah fasalka. Waalidiinta qaar diiradooda kama saaraan caruurtooda gabi ahaan waalidiinta qaarna waa ku mashquulsan yihiin arintaas oo ka careysiisa caruurta.
Mar saddexaad, waalidku waa inay jaraan farqiga wada xiriirka. Waa inay caruurtooda kala hadlaan noloshooda. Haddii dhallinta da 'yarta ahi ay niyad jab ku dhacdo, waa waajib saaran waalidiinta inay la hadlaan maxaa yeelay ka hadalka dhibaatada ayaa sii deynaysa buufis waxayna ka caawineysaa soo noqoshada nolosha.
Qaan-gaarnimada waa marxalad aad muhiim ugu ah nolosha iyo maaraynteeda waxay la mid tahay tan wanaagsan ee jilicsan. Xalalka kor lagu soo sheegay ayaa kaa caawin doona sidii aad ula tacaali lahayd da 'yarta niyadjabsan
Xalku ma laha jadwal adag. Dhammaan waa arrin waqti ku xiran. Xalku wuxuu u shaqeeyay qof ehelkayga ah waxaanan rajaynayaa in xalalkani adigana ku caawin doonaan.
Tusaalaha kore, waxaad ku cadeyn kartaa qormada xalinta dhibaatada. Waxaan isku daynay inaan noqono sida ugu macquulsan uguna macquulsan waxaan rajeynaynaa in tani kaa caawin doonto qoritaanka qormada xalinta dhibaatada.
Qodobka diirada la saarayo ayaa ah inaad ku darto seddex faahfaahin oo taageeraya barta ugu muhiimsan hal cutub. Adiga oo arday ah, waa inaad xasuusataa sharciyada kor ku xusan oo aadan ilaawin inaad maskaxda ku hayso tirinta ereyga la siiyay.
Intaad ku guda jirtey xirfadaada waxbarasho, waxaa lagugu xil saari doonaa shaqooyin qoraallo kala duwan ah. Qormooyinka xalinta dhibaatada ayaa ah xidid qancin kara. Waa qoraaga shaqadiisa inuu kaliya ku qanciyo dhagaystayaasha inay daryeelaan, laakiin sidoo kale ka dhaadhiciyo inay qaadaan tallaabo cayiman.
Waad ka badbaadin kartaa asxaabtaada culeyska sahaminta internetka tan, kaliya dhagsii badhanka saamiga oo kula xiriir iyaga qadka baraha bulshada.
Xariirka Shaqaalaynta Qalinjabinta Kimpact Consulting 2020 | www.kimpact.org.ng
HUKPOLY Gooyaa Mark 2020/2021 iyo Qaybta Gooya Qaybta
NECO Syllabus 2021/2022 ee Dhammaan Mawduuca - SSCE iyo GCE
Ogeysiiska Shirka FUTA 31aad - Ogeysiiska FUTA dhamaan ardayda qalin jabisa
UI Post UTME 2020/2021 Foomka Baaritaanka Fadhiga, U-qalmitaanka iyo Wakhtiga Kama Dambaynta ah
Macalimiinta KSU Waxay Bilaabeen Shaqo Joojin Aan Xad Laheyn
Jaamacadda McGill oo si buuxda u maalgelisay deeqaha waxbarasho ee ardayda Afrikaanka ah ee 2021
Tags: Rinji Sawir Gunaanad ah, Xalka Dhibaatada Qormada, Talaabada Tilmaamaha Talaabada ah iyo Tusaalaha, Waa maxay Qormada Xallinta Dhibaatada?, Maxaa tusaale u ah Qormada Dhibaatada iyo Xalka?
« 30-ka Shaqooyinka ugu Lacag Bixinta Badan ee Ka Qalinjabiya Ameerika 2021 Cusboonaysiinta
Shuruudaha Shaqaaleynta ee NCAA iyo Tilmaamaha loogu talagalay Ciyaartoyda »
Big Brother Naija 2021- Macluumaad Faahfaahsan oo ku saabsan
Xariirka Shaqooyinka Crossover ee Nigeria 2021 www.crossover.com
Shaqooyinka Isgoysyada ee Nigeria 2021 Shuruudaha U -qalmitaanka iyo Hagaha
Salaadaha Kirismaska ​​ee ugu Fiican si loogu sheego Qoyska iyo Asxaabta Dabaaldegga Gargaarka
25ka Shirkadood ee ugu Lacag -bixinta Badan 2021 - Liiska Dib -u -eegista iyo Qiimeynta Ugu Fiican
Waxbarida Shaqooyinka Meer Meey Ah 2021 Eeg Shuruudaha U-Qalmitaanka Ugu Dambeeya
Qoritaanka Shaqaalaynta ee FRSC 2021/2022 Xariirka Foomka Codsiga
Noocyada Shirkadaha Waa inaadan Waligaa u Shaqeyn 2021
Qorista qorista ee FRSC.frsc.gov.ng 2021/2022 Xariirka Codsiga
Shaqooyinka Lagos 2021/2022 Tilmaamaha Codsiga iyo Shuruudaha U-qalmitaanka
Barida Shaqooyinka Nigeria 2021/2022 Meelaha Shaqada ee Casriga Ah Online
Xariirka Shaqaalaynta ee FRSC iyo Bogga Codsiga Shaqooyinka
Shaqooyinkii Ugu Dambeeyay ee Nigeria 2021 ee Ardayda Cusub ee Qalinjabisay oo leh Darajooyin Wanaagsan
Shaqooyinka Port Harcourt 2021/2022 Tilmaamaha Codsiga iyo Shuruudaha U-qalmitaanka
Dashboardka Soo-galidda ee NYSC 2021 Boggeyga Dashboard-ka ee NYSC.nysc.org.ng
Xariirka PTI www.portal.pti.edu.ng Hubi Cusboonaysiinta Codsiga Ugu Dambeeya
Sida Looga Codeeyo BBNaija 2021 - Habka Codbixinta Oo Dhan
Xariirka Ardayga UEI 2021/2022 Cusboonaysiinta | Iska Diiwaangeli Akoon Cusub
Xariirka Codsiga NDA www.nda.edu.ng/#home/index Hubi Cusboonaysiinta Ugu Dambeysa